> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan AVCHD in MPEG
AVCHD, gaaban Advanced Video sireed High Qeexid, waa qaab file-ku-saleysan u duubay digital oo loo maqli of-qeexidda sare video ah. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalo siyaabo kala duwan saarayaasha fiidiyo, laakiin loo maqli karo waa wax xadidan. In this midabo, dunida firfircoon, waxaad hubaal tahay ma ku qanacsan tahay isticmaalka kooban oo file gaar ah. Iyaga diinta soo galay file ah oo caadi ahaan loo isticmaalo MPEG waa one-stop aad xal. Sidaas, waxaad ku raaxaysan karaan AVCHD videos on ciyaartoyda kala duwan video, video tafatirayaasha, iyo qalabka la qaadi karo.
Si loo gaaro diinta kor ku xusan, waxaad u baahan tahay AVCHD ah in Converter MPEG sida Wondershare Video Converter . Waxaa qoreysa awoodda diinta ka awood badan iyo eber khasaaro tayada wax soo saarka. Waxaa intaa dheer, waxa ay siisaa qalab tafatirka caadiga ah si kor loogu qaado aad videos si fudud oo si deg deg ah. Raac hoos ku waayo-aragnimo hage diinta ka kaaftoomi-free ah. (Fiiro gaar ah: hoos ku hage qaadataa shaashada daaqadaha, Haddii aad socda Mac ah, fadlan si raxmad leh tixraac User Hagaha Video Converter u Mac ).
Qeybta 1: faahfaasan guide on AVCHD in MPEG diinta
Qeybta 2: Waraaqda audio la AVCHD in ay MPEG Converter
Qeybta 3: Habee video la AVCHD in ay Converter MPEG
Qeybta 1: AVCHD in Conversion MPEG: Hagaha faahfaahsan
Talaabada 1: Import files AVCHD . Ku rakib oo ay maamulaan video Converter this. Connect aad fiidiyo ugu computer by USB, ka dibna riix File icon inay dajiyaan ilaha files AVCHD. Haddii video waxaa laga heli karaa miiska, si fudud iyaga si toos ah Jiida Jaximo suuqa kala barnaamijka.
Talaabada 2:. Yeel fursadaha saarka Riix icon Qaabka soo socda si ay muuqaal ee hoose ee in la furo liiska qaabka wax soo saarka (shiidaa kasta oo video iyo fursadaha audio bixiyo). Halkan, waxaad riixi kartaa "Common Video", dooro "MPEG-2". Haddii aad rabto in aad saamayn qeexitaanka sare, u tag "HD Video"> "HD MPEG", ay u shaqayso weyn on your HDTV.
Talaabada 3: AVCHD Bilow in diinta MPED . Riix badhanka badalo, iyo AVCHD si Converter MP4 samayn doonaa inta ka dhiman. Ka dib qaab beddelidda, iyaga la wadaagto saaxiibadaa iyo qoyskaaga ama geliyaan si ay u YouTube. Sidoo kale, waa inaad ku soo dhoofsadaan kartaa iPhone, iPod, PSP, Zune, iwm si habsami leh oo iyaga ku raaxaysan on go ah.
Wondershare Video Converter sidoo kale kaa caawinaysaa in aad ka files AVCHD aad Macdan audio iyo badbaadin sida MP3, wmv, M4A, AAC, AC3, iwm Markaas waxaad samayn kartaa adiga oo ringtone shakhsi. Riix qaab icon soo socda si video horyaalka kasta si ay u helaan liiska qaabka wax soo saarka. Markaas dooro "Common Audio" iyo dooranayaan. Hubaal waxaad dooran kartaa qaabab dhowr ah file isla duplicating waxyaabaha aad ku saxaarad shayga.
Ka sokow awood muhiim ah diinta, taas video Converter sidoo kale siisaa qalab tafatirka awood badan si kor loogu qaado aad video. Riix "Edit" oo ku kasta bar video item, iyo doorato haddii aad doorbidayso.
dib la diiwaangeliyey AVCHD video lagu ciyaari karo on your computer la xir-gaar ah:
. 1) Play ka fiidiyo ku xiran via USB sida qalab lagu kaydiyo dibadda ee computer
2) ka diiwaan warbaahinta la isticmaalayo drive DVD ama akhristaha kaadhka xusuusta ah Play si toos ah .
3) Play on kompiyuutarkaaga isticmaalaya drive adag dibadda ku lifaaqan.
Si xor ah u dejisan iyo isku day video Converter this.